Lahateny nataon’i Fulgence Razakarivony, M.S, fiarahabana ny Papa Fransoa - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Lahateny nataon’i Fulgence Razakarivony, M.S, fiarahabana ny Papa Fransoa
Nangonin'i R.T.M il y a 23 jours
Ny lahateny nataon’i Mgr Fulgence Razakarivony, M.S, evekan’Ihosy ary filohan’ny Vaomieran’ny Eveka momba ny asa fanirahana ataon'ny lahika nandritra ny fiaretan-tory teny Soamandrakizay ny 7 septambra 2019 no aroso amintsika eto.
Ry Ray Masina,
Hafaliana safononoka no mameno ny fonay amin’izao takariva izao, hafaliana miavaka ary tsy misy toa azy satria tsy amin’ny alàlan’ny hafatra an-tsoratra na hafatra ampitaina amin’ny fahitalavitra toy ny tamin’ny JMJ nasionaly farany teo tao Mahajanga no ihaonanay aminao fa ny vatan-tenan’ny Papa François mihitsy no manoloana anay ary miteny aminay.
Faly tokoa izahay mandray anao eto amin’ity tanindrazana malalanay ity ka ny fihetseham-po manentana anay amin’izao hariva izao dia azo ampitahaina amin’ny hafalian’ny ankizy tafahaona amin’ny ray malalan’izy ireo, izay mandray azy ireo amin’ny fo feno fitiavana miaro halemempanahy.
Mandray anao izahay amin’ny maha-Mpiandry ondry tsara anao izay tonga hitady ireo ondry mitoetra eny amin’ny sisiny raha ny jeografia sy ny zava-misy iainana no jerena, araka ny voambolana ampiasainao ka raisinay ho fiteninay.
Indreo manoloana anao eto ireo solontenan’ny tanora malagasy izay mamorona ny salan’isa mihoatra ny 60 isan-jaton’ny mponina. Tanora malagasy feno hafanam-po sy hery eo am-pikatsahana izay ho avy mamiratra ary koa tanora miatrika olana maro eo amin’ny ara-tsosialy, ara-koltoraly, aratsaina sy ara-pivavahana.
Ireo tanora ireo anefa dia tsy mety kivy satria ankaherezin’ny fampianarana sy fitaomana ataonao azy ireo mba hiaina mandrakariva ny fanantenàna. Fanantenàna tsy manodoka izany satria miorina amin’ny finoana an’Ilay nandresy ny fahafatesana sy ny herin’ny ratsy.
Nanomboka tamin’ny fanorenana ny Eglizy eto aminay ka hatramin’izao, dia nitàna anjara toerana lehibe teo amin’ny fanatanterahana ny iraka hitory ny evanjely teto amin’ny firenenay ireo lahika, toa an’i Victoire Rasoamanarivo olon-tsambatra, izay vehivavy lahika nahay nitantana ny Eglizy vao niorina nandritra ny fotoana nanenjehana ireo misionera ka voatery nandao an’i Madagasikara tamin’izany.
Faranako ny teniko satria ireto tanora sy ny vahoaka malagasy dia efa liana ny hihaino anao, koa miaraka amin’ireo izay tonga eto anio no hilazana aminao amin-kafaliana indray hoe :
Tonga soa eto aminay ianao ry Ray Masina ary misaotra anao amin’ny fahatongavanao eto anio amin’izao hariva izao.